Mpanamboatra sy mpamatsy latabatra fandidiana gynecology China TF Shina TF | Wanyu
TF Fiasan-dresaka TF Hydraulika sy Manual
Ny latabatra fiasan'ny gynecology TF Hydraulika, ny vatana, ny tsanganana ary ny fototra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, miaraka amin'ny tanjaka mekanika avo, fanoherana ny harafesina, ary manampy amin'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina.
Ity latabatra fiasan'ny gynecology hydraulic ity dia misy fenitra amin'ny fitsaharana amin'ny soroka, ny soroka, ny fehin-tànana, ny fitsaharana amin'ny tongotra sy ny pedal, ny tavy misy fantsom-boaloboka, ary ny jiro fandinihana gynecological azo atao.
Ny haavon'ny latabatra fiasan'ny gynecology hydraulic dia azo ahitsy amin'ny pedal, ary ny fitongilanan'ny fandriana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanetsiketsehana ny tahony.
Rehefa voahitsaka ny frein, dia aondrana ny fotony miorina eo ambanin'ny farafara, izay mampitombo ny faritry ny fifandraisana amin'ny tany ary miantoka ny fiorenan'ny fandriana.
Izy io dia be mpampiasa amin'ny aretim-behivavy, ny fiterahana, ny urology ary ny fandidiana anorectal.
1. Fitaovana tsy misy vy
Ny tena vatan-kazo, lalamby an-kilany, ny fisondrotana ary ny fototry ny latabatra fiasan'ny gynecology hydraulic dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, miaraka amin'ny tanjaka mekanika avo, fanoherana ny harafo ary fanadiovana mora foana.
2. Halavan'ny latabatra
Ny sakan'ny latabatra fiasan'ny gynecology hydraulic dia mety hahatratra 600mm, izay tena sariaka amin'ny olona manana karazana vatana manokana ary manatsara ny fampiononana.
3. Fitaovana miovaova
Ankoatry ny fitsaharana mahazatra amin'ny soroka, ny fehin-tsoroka, ny tanany, ny tongotry ny tongony, ny tongotry ny tongotra, ny fako, ny jiro fizahana gynecological dia azo alaina ihany koa.
Fitaovana tsy misy vy
4. Tongotra raikitra tsy manam-paharoa
Ny latabatra fandidiana tsy manam-paharoa dia mampitombo ny faritra ifandraisany amin'ny tany ary miantoka ny fiorenan'ny gynecology hydraulic.
Tongotra raikitra tsy manam-paharoa
Model item Tofan'ny fiasan'ny gynecology TF Hydraulika
Ny halava sy ny sakany 1800mm * 600mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 900mm / 680mm
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg 8 ° / 20 °
Takelaka miverina (ambony sy ambany) 70 ° / 11 °
Zintin'aratra 220V / 110V
hatetika 50Hz / 60Hz
kidoro Kidoro mirindra
Fitaovana lehibe 304 Stainless vy
Fahaiza-manao fatra farany ambony 145 KG
No. Anarana be
1 Fanohanana amin'ny sandry Tsiroaroa 1
2 tahony Tsiroaroa 1
3 Takelaka tongotra Sombiny 1
4 kidoro 1 napetraka
5 Basin-fako Sombiny 1
6 Fixing Clamp 1 Pair
7 Knut Crutch 1 Pair
8 pedal 1 Pair
Previous: Tabilao fanadinana ara-pahasalamana elektrika FD-G-1 ho an'ny hopitaly
Manaraka: Tabilao fiasan-tsolika mekanika Hyd-TS-1 ho an'ny fandidiana ankapobeny
FD-G-1 fanadinana ara-pahasalamana elektrika ...
FD-G-2 China Electric Medical delivery Operati ...